Tirtireyso Trash faaruqa ah: tirtireyso Trash madhiyey Mavericks s
> Resource > Ladnaansho > tirtireyso Trash faaruqa ah: tirtireyso Trash madhiyey Mavericks
Ma suurogalbaa in tirtireyso Trash madhan on computer Mavericks?
Marka aad tirtiray file in qashinka aad Mac, waxaad weli soo celin karaa Trash ah in aad damisid. Taasi waa shaqo Serie A si sahlan, oo user computer kasta waxaa la qaban karto dhibaatana ma leh. Maxay ku saabsan aad ka shubeen qashinka? Weli waa suurtagal in ay u burburin lahaayeen? Jawaabtu waa HAA, laakiin habka sidaas ma aha mid fudud. Iyada oo ku habboon xogta qalab soo kabsado Mavericks , aad tegayna Trash madhan ee Mac OS X Mavericks.
Tirtireyso Trash madhan ee Mavericks in 3 tallaabo
Ka hor inta aadan wax sameyn kale, aad u hesho qalab xogta soo kabsado Mavericks, Wondershare Data Recovery for Mac .
Tani software kabashada xogta Mavericks ha kartaa in aad soo kabsado tirtiray photos, videos, audio, waraaqaha iyo ka badan oo ka Mac computer iyo qalab kale oo lagu kaydiyo dibadda. Xataa waxaad ka shubeen Trash ku saabsan Mac. Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dejisan iyo gashato on Risaalo meesha Trash ku yaal. File ayaa tirtiray la overwritten karaa iyadoo xogta cusub. Marka uu overwritten, marnaba ma soo doonaa mar kale.
Wondershare Data Recovery for Mac Siinayaa hababka 5 kabashada. Waxaad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah adiga kugu habboon. Si tirtireyso Trash madhan ee Mavericks, waxaad dooran kartaa ka lumay Recovery File hab, kaas oo awood kuu inuu ka soo kabsado files weelna Trash. Markaasuu ku biiro tallaabada xigta.
Tallaabada 2. Scan qasi Trash madhan ee Mavericks
Halkan, barnaamijka wuxuu muujin doonaa oo dhan drives macquul ah in uu ka helay on your Mac. Mid ka mid ah halkaas oo Qashinka ku yaal Dooro iyo bilaabi u baar.
Fiiro gaar ah: Marka aad u baahan tahay inay soo dhiciyaan xogta laga badiyay ka storage devices dibadda, waxa kale oo aad isticmaali kartaa barnaamijkan. Xerto computer ka, ka dibna waxa kale oo loo aqoonsan doono iyo muuqdaan in liiska sida soo socota.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta laga helay qashinka aad Mavericks Mac
Skaanka aad qaadan doonta muddo quruxsan. Marka waa dhameystiran, waxaad ku eegaan karo files helay soo bandhigay natiijada baaritaan mid mid. Waxaad ka eegi kartaa shayga aad rabto, ama kaliya hubi galka Qashinka oo dhan oo ka soo kabsado si aad u computer. Markaas waxaad iyaga ku hubin kartaa on your computer mid mid.
Fiiro gaar ah: Haddii ay jiraan faylal aad u badan oo natiijada scan, waxaad isticmaali kartaa shaqo filter si ay u kala miiri natiijada. Tusaale ahaan, waxaad sameyn kartaa nooca file iyo qaabka file aad raadineyso weeyna ka, si aad si fudud u heli karaan faylasha aad diirada u saaran.